ပြည်ထောင်စု ရေးရာ: March 2009
စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေးဆီသို့
ကယန်းအမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့၊
Federal (2nd Editon final).pdf
Posted by Dr. Tint Swe at 12:51 PM2comments
Posted by Dr. Tint Swe at 7:50 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 7:48 PM0comments
ဤကမ္ဘာ၌ များစွာသော နိုင်ငံတို့သည် လူမျိုးအများအပြား ပါဝင်ပေါင်းစပ်လျက် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြ၏။ ဤသို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည့် ပြည်ထောင်စုများအနက် အချို့သော ပြည်ထောင်စုတို့၌ တန်းတူညီမျှသော အခြေခံဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာ၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွါးကို အညီအမျှပြု၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ငြိမ်းချမ်းလျက်ပင်ရှိကြ၏။ ပြဿနာကြီးငယ် ပေါ်ပေါက်သည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းကာ ပြေငြိမ်းစေ၏။ အချို့သော ပြည်ထောင်စုများတွင်းမူ အပေါ်စီးရနေသော၊ အင်အားကြီးသော၊ လူဦးရေအားဖြင့် များသောလူမျိုးများက “လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒ”ကို ကျင့်သုံးလျက် လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်ကြ၏။ ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ရာ၌လည်း မညီမျှသော အခွင့်အရေးများကိုပြဌာန်း ကျင့်သုံးကြ၏။ အချို့မှာမူညီမျှသော အခွင့်အရေးများကိုပင် ပြဌာန်းထားသော်လည်း၊ ထိုအခွင့်အရေးများကို ကျန်လူမျိုးများက မကျင့်သုံးနိုင်အောင် ဖိနှိပ်လွှမ်းမိုးထားကြ၏။ ထိုကြောင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ လူ့အခွင့် အရေးများတွင် မညီမျှမှုဖြစ်ပေါ်ကာ နက်ရှိုင်းသော အမျိုးသားရေး ပြဿနာ များပေါ်ပေါက်လာကြ၏။ လူမျိုးအချင်းချင်း မကြေနပ်မှု၊ မုန်းတီးမှုများ ပွားများ၍ ပဋိပက္ခများ ကျယ်ပြန့်လာ၏။ နောင်သောအခါ ပြည်ထောင်စုကြီးပါ ပြိုကွဲ ပျက်စီးရပေသည်။
ပြည်ထောင်စုကြီးကို ဖွဲ့စည်းရာ၌လည်း ကွဲပြားခြားနားသည့် လူမျိုးများ၏ မတူညီ ကွာဟသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ အခြေခံများပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းကြရ၏။ ထိုအခြေအနေများကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒကျင့်သုံးကာ လူမျိုးတမျိုးက ကျန်လူမျိုးများအပေါ် စိုးမိုး ချယ်လှယ် အုပ်ချုပ်လေ့ရှိကြပေသည်။ လွဲမှားသော အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုသည်မှာ မိမိတို့လူမျိုးသည် မြင့်မြတ်သော အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ကြွေးကြော်လျက် ထိုသို့မြင့်မြတ်သည့် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ခြင်းသည် ပင်လျင် အခြားသော လူမျိုးများအား စိုးမိုးအုပ်ချုပ်စီမံခွင့်ရှိသည့် နိမ့်ကျသော အမျိုးအနွယ်များကို ဖိနှိပ်စိုးမိုးချယ်လှယ်ရန် အခွင့်အရေးများ ရှိသည်ဟူ၍ ယူဆတတ်ကြသည်။ ထိုအယူအဆဖြင့်ပင် ပြည်တွင်း၌ ဖိနှိပ်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ပြီး အင်အားကြီးထွားလာသောအခါ ပြည်ပနိုင်ငံများကို အင်အားသုံး၍ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်ကြပေသည်။ “မှန်ကန်သောအမျိုးသားရေးဝါဒ”မှာမူ မည်သည့်လူမျိုးရေး ဖိနှိပ်မှုကိုမဆို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်၏။ မိမိလူမျိုးအား အခြားလူမျိုးက ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရုံ သာမက မိမိလူမျိုးက အခြားလူမျိုးအပေါ် ဖိနှိပ်ချယ်လှယ်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်သည်ကိုလည်း ဆန့်ကျင်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲများတွင် မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒကို ကိုင်စွဲကာပြည်သူလူထု ကြီးတရပ်လုံးကို စည်းရုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထူးခြားသည်မှာ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒကို ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပေါင်းစည်းပြီး အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် (၁၉၃၂)ခုနှစ်လောက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်(ဝါ)အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်လာပြီး အမျိုးသားပညာရေး တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင် ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၃၆)ခုနှစ် ကျောင်းသားသပိတ်ကြီးမှာ ပါဝင်ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။ သပိတ်ကြီးအပြီးတွင် နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲသို့ ခြေစုံပစ်၍ဝင်ခဲ့သည်။ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ (၁၃ဝဝ) ပြည့်အရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ဦးစီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကို တည်ထောင်ကာ လွတ်လပ်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။
ဤသို့ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးခေတ်တွင်ချမှတ်ခဲ့သော “ဗမာပြည်သည်ဒို့ပြည်၊ ဗမာစာသည် ဒို့စာ၊ ဗမာစကားသည် ဒို့စကား၊ ဒို့ပြည်ကို ချစ်ပါ၊ ဒို့စကားကို ချီးမြှင့်ပါ၊ ဒို့စာကိုလေးစားပါ”ဟူသည့် အမျိုးသားရေးဝါဒအလံကိုပင်ကိုင်စွဲခဲ့ပေသည်။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးသည် အမျိုးသားရေးစိတ် နိုးကြားလာပြီး ဝိုင်အမ်ဘီအေ၊ ဂျီစီဘီအေ အသင်းချုပ်ကြီးအောက်တွင် ညီညွတ်သော အင်အားစုအဖြစ် စုစည်းမိခဲ့ကြသော်လည်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့၏ပရိယါယ်ကျောက်ဆောင်များ ဖြစ်သော တွဲရေး/ခွဲရေး၊ ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေး၊ (၉၁) ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးများနှင့် တိုက်မိသောအခါ ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ပြိုကွဲနေသော အမျိုးသားအင်အားစုများ၏ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်သည့် အနေဖြင့် ဗမာ့ထွက်ရပ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ကြီးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေသည်။ ထိုအဖွဲ့ကြီးသည် ပါတီပေါင်းစုံ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အဖွဲ့ကြီးဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ကြီး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးဟူ၍ ဖေါ်ပြထားပေ သည်။ ဤသို့အားဖြင့် အမျိုးသားရေးဝါဒကိုပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေ နှင့်ကိုက်ညီအောင်ချမှတ်ခဲ့ပေသည်။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားနှင့် လူထုလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံကိုလည်းစည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ၄င်းအပြင် ရဲဘော် (၃ဝ)မှ သောင်းချီသော အမျိုးသားတပ်မတော်ကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပေ သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်သော ဖတပလ (နောင် ဖဆပလ)ကိုဖွဲ့စည်းလျက် တပ်မတော်ကိုပါ ၄င်းအဖွဲ့နှင့် ပေါင်းစပ်ပေးကာ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ နောင် ဗြိတိသျှတို့ကို နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင်လည်း တမျိုးသားလုံးကို သိပ်သိပ်သည်းသည်းဖြင့် နက်ရှိုင်းစွာ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပေသည်။
သို့ရာတွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ဗမာတမျိုးသားလုံးကို စည်းရုံးနိုင်ရုံမျှနှင့် မပြည့်စုံ၊ မလုံလောက်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပါဝင်သော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည်ကို ကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား စည်းရုံးရေးကို အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းခဲ့ပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုကို ဂျပန်ခေတ်၌ စတင်တွေ့ရပေသည်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေး၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲသည် တမျိုးသားလုံးအကျိုးဖြစ်ရကား မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေအားဖြင့် အတော်အသင့်များသည့် ကရင်အမျိုးသားများပါဝင်လာရေးသည် အရေးကြီး ပေသည်။ ထိုနည်းတူစွာ ကရင်အမျိုးသားများကို မစည်းရုံးနိုင်လျှင် တနည်းအားဖြင့် ကရင်အမျိုးသားများ မပါဝင်လျှင် အခက်အခဲများရှိနိုင်ပြီး ကရင်နှင့်မြန်မာအမျိုးသားများပါ နစ်နာမည်ကို ကြိုတင်သိမြင်ခဲ့ပေသည်။ ထို့အပြင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲတရပ်လုံးတွင် ကရင်အမျိုးသားများ ပါဝင်လာရေးအတွက် စည်းရုံးရေးသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သကဲ့သို့ ကရင်-ဗမာညီညွတ်ရေးသည် အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနှင့် လွတ်လပ်ရေးအတွက် သော့ချက်ကျသော ပြဿနာတရပ်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သဘောပေါက်ခဲ့ပေသည်။
“ကရင်အမျိုးသား ရဲဘော်အပေါင်းတို့ -
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများသို့ ယခင်အခါ ကျွန်ုပ်လှည့်လည် လာရောက်စဉ်က ကျွန်ုပ်အား ကရင်အမျိုးသားများ၏ အကြီးဆုံးမိတ်ဆွေ တဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုစေလိုကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည်ကို ရဲဘော်တို့ အချို့ ကြားမိကောင်းကြားမိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုတဖန် ဤစကားကို ထပ်မံ ဖေါ်ပြကမ်းလှမ်းလိုပါသည်။ ဗမာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးများ တစည်းတရုံးတည်းဖြစ်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ဗမာနိုင်ငံလူမျိုးများသည် မှန်ကန်သော လူမျိုးရေး တရားလက်ကိုင်ထား၍ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့နှင့် အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ရှေးယခင်ကစ၍ ယုံကြည်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဤစိတ်ထားမှာ ယခုစစ် အခြေအနေတွင် ခါတော်မီဝါဒသဘောမဟုတ်သည်ကို တိတိလင်းလင်း နားလည်စေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ စေတနာသည် ကရင်အမျိုးသားများအပေါ်သာမက ဗမာနိုင်ငံလူမျိုးအားလုံးပေါ်တွင် ထားပါသည်။ ဤစေတနာ ဤစိတ်ထားသည် တနေ့နေ့ လက်ငင်းအားဖြင့် လက်တွေ့ကျွန်ုပ် ပြနိုင်သည့်အခါတွင် ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။
ဤသဝဏ်လွှာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ မှန်ကန်သော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မှန် ကန်သော သဘောထားရည်တည်ချက်များကို လေးစားဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပေသည်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ရေး အကြိုကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ် သဘေားထားနှင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်များကို ပီပြင် ထင်ရှားစွာ တွေ့လာရပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်သည် ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့သော မိန့်ခွန်းများတွင် ထင်ဟပ်လျက်ရှိပေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် လွတ်လပ်ရေးရယူရာ၌ ဗမာပြည်ကိုသာမက တောင်တန်းဒေသများကိုပါ ပူးပေါင်း၍တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်စေလိုသည်။ တောင်တန်းဒေသများ မပါသော လွတ်လပ်ရေးသည် ဗမာပြည်၏ ပြီးပြည့်စုံသော လွတ်လပ်ရေးဟု မယူဆပေ။ ဘဝတူ တိုင်းရင်းသားများကိုလည်း လွတ်လပ်စေလိုသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေးကို ဗမာများက စိုးမိုးခြယ်လှယ်ရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ တမျိုးသားလုံး၏ အကျိုးကို ရည်မျှော်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘဝတူ ညီအကို တိုင်းရင်းသားများသည် အကွဲကွဲအပြားပြား ဆောင်ရွက်နေခြင်းထက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာ အကျိုးများနိုင်မည်ဟုပင် ယုံကြည်သည်။ ပူးပေါင်းသည်ဆိုရာ၌လည်း မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ပူးပေါင်းရေးကိုသာ လိုလားပုံကို အောက်ပါ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်များမှ သက်သေပြလျက်ရှိပေသည်-
“ကျွန်ုပ်သည် ယခုဘုရင်ခံမင်းကြီးတိုက်ရိုက် အုပ်ချုပ်နေသောနယ်များပါ ဗမာပြည်နှင့်တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်စေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ဖဆပလ ၌လည်း ဤအတိုင်းအတာထား၍၊ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးများကလည်း ဤ အတိုင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း” (ဘုရင်ခံမင်းကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားချက်မှ)
“နယ်စပ်ဒေသများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခက်အခဲရှိမည်မထင်ကြောင်း၊ ၄င်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အလိုအလျောက် ပူးပေါင်းရန် သဘောကျကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အတင်းအကြပ် ပူးပေါင်းခိုင်းရန် မကြံရွယ်ပဲ ၄င်းတို့အနက်မှ အမှုဆောင်ဝန်ကြီးတဦးခန့်ထားရန် သဘောတူခဲ့ကြောင်း။” (မန်ချက်စတာ ဂါးဒီယန်း သတင်းထောက်နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားချက်မှ)
“ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်များ ပြဿနာသာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း၊ တောင်တန်းနယ်များ မလွတ်လပ် သရွေ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ပြီဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ ဗမာများသည်တောင်တန်း လူမျိုးများကို ၄င်းတို့ဘာသာ အုပ်ချုပ် စေလိုကြောင်း၊ ဗမာများသည် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့၏ ပြည်တွင်းရေးကို စွက်ဖက်မည် မဟုတ်ကြောင်း” (ပင်လုံတွင် ပြောကြားချက်မှ)
“မြန်မာများသည် ဗြိတိသျှ၏ကျွန် မဖြစ်လိုကြောင်း၊ ထိုနည်းတူစွာ တောင်တန်းလူမျိုးများသည် ဗြိတိသျှကျွန်အဖြစ် မရောက်စေလိုကြောင်း၊ ထို့ပြင် တောင်တန်းလူမျိုးများသည် မြန်မာ့ကျွန်အဖြစ်လည်း မဖြစ်စေလို ကြောင်း” (ပင်လုံတွင် ပြောကြားချက်မှ)
“တိုင်းပြည်ကြီးပွားစေချင်ရင်- ဗမာကတမျိုး၊ ကရင်ကတဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့က တခြား အကွဲကွဲအပြားပြား လုပ်နေကြရင်ဖြင့် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ စုပေါင်းလုပ်ကြမှသာ အကျိုးရှိနိုင်မည်”(ရှမ်းစော်ဘွားများတည်ခင်းသည့် ထမင်းစားပွဲတွင် ပြောကြားချက်မှ)
အမေရိကန်လူမျိုးဆိုရင်လည်း ဥရောပလူမျိုးစုံ အမေရိကန်မှာ လာနေပြီး အမေရိကန်လူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ လူအားလုံးကို ခေါ်တာပဲ၊ ဒီတော့ (Nation) သို့မဟုတ် (Nationality) ခေါ်တဲ့ လူမျိုးကြီးကိုဆိုကြပါစို့- အဲဒီ လူမျိုးကြီးဆိုတာ ဘယ်လိုအချင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှ လူမျိုးကြီးလို့ခေါ်မလဲ။ အဲဒီလူမျိုးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသရုပ်ဖေါ်ထားသလဲဆိုရင်”လူမျိုး ကြီးဆိုတာ ရာဇဝင်အရဖြစ်ပွားပြီး၊ တည်တည်တံ့တံ့နေလာတဲ့သူ၊ ဘာသာစကားနဲ့၊ သူ့နယ်မြေနဲ့၊ သူ့စီးပွားရေးနဲ့၊ သူ့ယဉ်ကျေးမှု ပညာ ထုံးစံဓလေ့နဲ့ညီညွတ်စည်းရုံးထားတဲ့ လူပေါင်းစုပဲလို့ သရုပ်ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ လူပေါင်းစုဆိုတာဟာ (A Nation is notaracial or Tribal community of people) လို့အတိအလင်းဖေါ်ပြထားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူမျိုးကြီးဆို တာ အသွေးအဆင်တူတဲ့ (Race) တို့ (Tribe) လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးစုမျိုးမဟုတ် ဘူး၊ အဲဒီ(္မခေန)တို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းလင်းပြန်တယ်။” x x x
ဒါဖြင့် အဓိပ္ပါယ်က ဘယ်လိုသဘောလဲ။ လူမျိုးကြီးဆိုတာ အချင်း ချင်းပေါင်းသင်းနေရင် (Ragional autonomy) ဆိုတဲ့ နယ်မြေအရ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီး၊ ခွဲထွက်ခွင့်ပါရထိုက်သတဲ့ (The right of self-determi-nation means thatanation can arrange its life according to its own will. It has the right to arrange its own life on the basis of autonomy. It has the right to enter into federal relation with other nation. It has the right to complete secession) လို့ဆိုထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ပြော ထားတာ ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို လူမျိုးကြီးဆိုတာတိုင်း ရထိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် နေရာတကာမှာ အမြဲတမ်း မဟုတ်ဘူး ကောင်းကျိုး လုပ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။ ဆိုးကျိုးလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောထားတယ်။ လူမျိုး အချင်း ချင်းချယ်လှယ်လွှမ်းမိုးမှု၊ နှိပ်စက်မှု မဖြစ်ရအောင် ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကို လူမျိုးကြီးတိုင်းကို ပေးထားတာပဲ။
ဒါတွေအားလုံးðခံလိုက်တော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်ထွက်သလဲဆိုရင် လူမျိုး ကြီးဆိုတာ အချင်းချင်းပေါင်းကြရင် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အရ ပေါင်းကြ။ ဒါပေ မယ့် နေရာတကာ အချိန်အခါတိုင်းမှာ အခြေအနေအကျိုးအကြောင်းကို မထောက်ပဲ အရမ်းကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒါက (Nation or Nationality) ဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့်သိထိုက်သော သဘောတရားတွေပဲ။ ပြီးတော့-
x x x ဒီတော့ လူမျိုးရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တော်တော်စုံစုံ လင်လင်ပြောပြပြီးတဲ့နောက် ကျနော်တို့ ဗမာပြည်သစ်ကို တည်ထောင်တော့ ပြည်ထောင်စုသဘောတည်ထောင်မလား၊ လူမျိုးကြီးတမျိုးတည်းပဲဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုး (Unitary State) တည်ထောင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုလိုတယ်။ ကျနော့်အမြင်အရဆိုရင်တော့ အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေးအရ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးတွေကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ (Unitary State) လူမျိုးကြီးတမျိုးဆိုတဲ့ နိုင်ငံမျိုးတော့ ထောင်လို့မဖြစ်ဘူး။ ပြည်ထောင်စုသဘောမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ပေါင်းကာမှ “ဆေးအတွက် လေး”ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုမျိုးတစိတ်တဒေသက တခုလုံးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမျိုးဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည်ထောင်စုဟာ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို စုပေါင်းပြီး စနစ်တကျ စီစဉ်နိုင်မယ့် ပြည်ထောင်စုမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှ လူမျိုးအားလုံး တိုင်းသူပြည်သားအများဆုံး တိုးတက်မှုကို လုပ်နိုင်မှာပဲ။ ပေါင်းတယ်ဆိုတာ အချင်းချင်း ကောင်းကျိုးရှိအောင် ပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီး ဆိုးကျိုးရှိအောင် ပေါင်းတာမျိုး ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
၃(၁) အောက်ပါ အင်္ဂါလက္ခဏာအားလုံးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့ သော်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံ၍ (ခ)(ဂ)(ဃ)(ခ)တို့၌ ဖော်ပြထားသော နယ်မြေများသည် ဤတိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်၍ နောင်အခါ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင် ထိုသို့ ဆုံးဖြတ် သတ်မှတ်သောတရားဥပဒေနှင့်အညီ”ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်” အဆင့်အတန်းကိုဖြစ်စေ၊ “ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရ ပြည်နယ်အဆင့်အတန်းကိုဖြစ်စေ” “လူမျိုးစုပြည်နယ်” အဆင့်အတန်းကိုဖြစ်စေရရှိမည်။
၇) သီးခြားပြည်ထောင်စု “အဖွဲ့ဝင်တခု” အဖြစ်ဖြင့် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ထင်ရှားချက်အတိုင်းနေလိုသော ဆန္ဒရှိခြင်းတို့ဖြစ်လေသည်။
၄။ (ဤနေရာမှစ၍အောက်တွင်”ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုအဖွဲ့”ဟုခေါ်ဆိုအပ်သော)ဗဟိုဥပဒေပြုအဖွဲ့၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံ တဝှမ်းလုံး၌တည်ရမည်။ “ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်” သို့မဟုတ် ”ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရပြည်နယ်” သို့မဟုတ် ”လူမျိုးစုပြည်နယ်” တို့၏ ဥပဒေအဖွဲ့များကို လုံးဝခွဲဝေ လွှဲအပ်ပေးသည့် ဌာနအမျိုးအစားထဲတွင်မပါဝင်သော ကိစ္စခပ်သိမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၌ မည်သို့ပင်ဆိုထားစေကာမူ ပြည်ထောင်စုဥပဒေအဖွဲ့၏ ဥပဒေပြုအမိန့်အာဏာသည် အောက်၌သီးခြားဖေါ်ပြထားသော ဌာနအမျိုးအစားများတွင် ပါဝင်သည့် ကိစ္စအားလုံးတို့ အပေါ်၌ တည်ရမည်။
၅) “ပြည်ထောင်စုနယ်” “ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရ ပြည်နယ်” “လူမျိုးစု ပြည်နယ်” တို့မှတပါး ကျန်နယ်မြေများနှင့် စပ်လျဉ်းသောကိစ္စများ။
၇(၁) “တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ” ၏ အခွင့်အရေးများဖြစ်သော
၈။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် “ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်” “ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်နယ်” “လူမျိုးစု ပြည်နယ်”တို့အား ပိုင်းခြား ခွဲဝေလွှဲအပ်ထားသောအာဏာများမှတပါးလွတ်လပ်သော အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် သမတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြု အာဏာကိုလည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုလည်းကောင်း၊ တရားစီရင်မှုအာဏာကိုလည်းကောင်း စိုးပိုင်ရမည်။ ထိုအာဏာတို့ကို နိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကတည်ထောင်ထားသောပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရဌာနများက သော်လည်းကောင်း၊ ထိုဌာနများ၏ အမိန့်အရသော်လည်းကောင်း သုံးစွဲနိုင်ရမည်။ ပြည်ထောင်စုအာဏာနှင့် ပြည်နယ်၏အာဏာကို ခွဲဝေသတ်မှတ်ထား မည်ကို အတိအကျဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
၉။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိပြည်သူအားလုံးတို့၏ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်ထိုက်သော နိုင်ငံတော်၏အကြီးအမှူးဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် သမတနှင့်တကွ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လူမျိုးစုလွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပါသော ပြည်ထောင်စု မဟာလွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြု အာဏာကိုစိုးပိုင်ရမည်။ နိုင်ငံတော်သမတအား ပြည်ထောင်စု မဟာလွှတ်တော်က ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်များကို လျို့ဝှက်သောမဲဆန္ဒပေးစနစ်ဖြင့်အရွယ်ရောက်သူတိုင်းက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရမည်။ လူမျိုးစုလွှတ်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်မှလည်းကောင်း တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုမှ လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တခုအဖြစ်ဖြင့် စုရုံးဖွဲ့စည်း အပ်သောကျန်နယ်မြေများမှလည်းကောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်အမတ်များ ပါဝင်ရမည်။
“မြန်မာ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဆိုတာကို ကျနော် အထူးရှင်းပြ နေစရာမလိုပါဘူး။ သည်နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ထောင်စုတွေ စုထားမည်ဆိုတဲ့ သဘောလောက်ပါပဲ။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဆိုကတည်းက ကျနော်တို့ အခုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ (Unitary Constitution) လူတမျိုး တည်းဆိုတဲ့ နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘဲနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရောက်သွားပါတယ်။ အဲသည်တော့ ကျနော်ကနေပြီးပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းအပ်တယ်လို့ အဆိုသွင်းတဲ့ကိစ္စမှာ ယခု ကြွရောက်လာကြတဲ့ အမတ်မင်းများက ဗမာနိုင်ငံတော်ကို သည်လိုပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် ဖွဲ့စည်းအပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ အခြေခံမူဟာ သင့်မသင့်ကို သည်လွှတ်တော်ကြီးက စဉ်းစားဘို့ပါပဲ။
ကျနော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ထောက် လို့ကြည့်လျှင် ကျနော်တို့နိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ်နှင့် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်မှသာလျှင် သင့်လျော်လျောက်ပတ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတိုင်း သည်အခြေခံသဘောကို သည်အဆိုထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး သည်လွှတ်တော်ကြီးမှာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာ တင်ပြထားခြင်းအားဖြင့် ယခု သည်တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာကြွရောက်လာကြတဲ့ တောင်တန်းဒေသများ ကိုယ်စားလှယ် အမတ်မင်းများဟာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်တွင် သူတို့သက်ဆိုင်ရာနယ်များက ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်သွားမည်လား ဆိုပြီး သံသယရှိနေတယ်လို့ ကျနော်သိရပါတယ်။
အဲသည်တော့ ဒီကစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ ကျနော် တိတိလင်းလင်း ရှင်းလင်းချင်တာကတော့ ဗမာပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော် လို့ခေါ်တွင်ဖို့ဆိုပြီး တော့ သည်အဆိုထဲမှာတင်ပြထားပေမည့်သည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွေထဲမှာ ဘယ်နယ်တွေပါလို့၊ ဘယ်နယ်တွေပါရမည်လို့၊ သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေး ပါဘူး။ သည်တော့ တောင်တန်းဒေသကနေပြီးတော့ တက်ရောက်လာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဘာမျှသည်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာအလျှဉ်း မရှိပါဘူး။ သည်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ထဲမှာ ကိုယ်ပါချင်မှ ကိုယ့်နယ် ဆိုင်ရာမှနေပြီးတော့ ပါချင်မှပါနိုင်တာပဲ။ သည်တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော် မဖွဲ့ စည်းမီအခါမှာ တိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းရန်အလို့ငှါ ကျနော်တို့သဘော တူညီချက်တွေ စာချုပ်အမျိုးမျိုးချုပ်တဲ့အခါတုန်းက တောင်တန်းဒေသ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျနော်တို့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အရဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်စေ၊ နောက်ပြီးတော့ တောင်တန်းဒေသဆိုင်ရာ စုံးစမ်းရေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှ ထောက်ခံချက်များကို ကျနော်တို့ လက်ခံလာခဲ့သည့် အတိုင်းဖြစ်စေ၊ အဲသည်လို လက်ခံထားခဲ့သည့် စာသဘောတွင်မကဘဲ (Not only the letter of agreement) သည်စာသဘောကို ကျနော်သဘောတူညီလာခဲ့တာတွင် မကဘဲ၊ ကျနော်တို့အဘို့မှာဆိုလိုရှိရင် (The spirit of agreement) သဘောတူညီလာခဲ့တဲ့ တကယ့်အရင်ခံ သဘောတရားကို လက်ခံပြီးတော့၊ သည် အတိုင်းဘဲ သည်တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ လုပ်မှာပါဘဲဆိုတာ၊ တောင်တန်းနယ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ တိတိလင်းလင်း နားလည်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပေးပြီးသားကတိ၊ နားလည်ပြီးသား သဘောတူညီချက်တွေကို၊ နယ်ချဲ့သမားတွေလို ကျနော်တို့ ဖောက်ဖျက်ခြင်းမလုပ်ပါဘူး။ သည်လို ပေးပြီးသား ကတိနှင့် နားလည်ပြီးသား သဘောတူညီချက်ကို ဖေါက်ဖျက်မည်လားလို့ သံသယရှိတဲ့လူတွေဟာ ဥက္ကဋ္ဌမင်း ခွင့်ပြုချက်အရပြောရလျင် ကျနော်တို့ ရဲ့ (Sensne of honour, Sense of self-respect, Sense of pride) တို့ကို စော်ကားတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။ အဲသည်တော့ ကျနော်တို့ ပေးပြီးသားကတိ၊ နားလည်ပြီးသားသဘောတူညီချက်တို့အရ၊ တောင်တန်းနယ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ တိုင်းပြည်ပြု လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာတဲ့အခါ သေသေချာချာနားလည်စေချင်တာက ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ကျနော်တို့ဗမာ လူများစုဖြစ်တဲ့ လူတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ကို အတင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုထဲမှာ မသွင်းပါဘူး။ သဘောမတူဘဲနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို လက်တလုံးကြား လိမ်တဲ့နည်းနှင့်လည်း ကျနော်တို့ မလုပ်ပါဘူးဆိုတာ အတိအလင်းနားလည်စေချင်ပါတယ်။”
ဤရှင်းလင်းချက်များက ပေါ်လွင်စေသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်သည့် အားလျော်စွာ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသာဖြစ်ရမည်။ ပြည်ထောင်စုများကို ပေါင်းထားသည့် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ ထပ်မံရှင်းလင်းထားသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ပြည်ထောင်စုတွင် ပါဝင်မည့် ပြည်နယ်များအနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်မူရှိပြီး မိမိ၏ဆန္ဒသဘော အလျောက်သာ ပါဝင်ရမည်။ အတင်းအကျပ်အားဖြင့် ပါဝင်စေခြင်းပြုလုပ်ရမည် မဟုတ်သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းထားပေသည်။ တဖန် ပင်လုံတွင်ချုပ်ဆိုခဲ့သော စာချုပ်စာတမ်း၏သဘောအရ၊ ၄င်းတောင်တန်းဒေသဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမှ ထောက်ခံချက်များကိုသာမက၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီ ချက်များကိုပါ ဖေါက်ဖျက်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြထားပေသည်။
ဤရှင်းလင်းချက်၏အခြေခံအကြောင်းတရားများကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက် ပင်လုံစာချုပ်နှင့်တကွပင်လုံစာချုပ်တွင်မပါသော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဆွေးနွေးချက်များ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၏ တင်ပြချက်များ၊ အပြန်အလှန် သဘောတူညီချက်များ ကတိကဝတ်များကိုပါ နားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုပေသည်။
သို့ရာတွင် ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်များကိုကား တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ တင်ပြချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် အပြန်အလှန်သဘောတူနားလည်မှုများ၊ ကတိကဝတ်များ အနေဖြင့်သာ ရှိနေကြပေသည်။ ထိုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်၏ ရှင်းလင်းချက်တွင်- “ကျနော်တို့ပေးပြီးသားကတိ၊ နားလည်ပြီးသော သဘောတူညီချက်တွေကို နယ်ချဲ့သမားလို ကျနော်တို့ ဖောက်ဖျက်ခြင်း မလုပ်ပါဘူး။ သဘောမတူဘဲ နေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကို လက်တလုံးကြားလိမ်တဲ့နည်းနှင့်လည်း ကျနော် တို့မလုပ်ပါဘူး-” ဟူ၍ပင် ထပ်လောင်းကတိပြုခဲ့ပေသည်။
“အဲသည် နိုင်ငံဟာလည်းသမတနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်။ သမတစနစ်အရ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူတွေ ထည့်ထားပါတယ်။ သည် နိုင်ငံတော်ဟာလည်း ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဖြစ်ရမယ်-”
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် လမ်းညွန်ပြ ဌာန်းချက်(၂)တွင်- “ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ သတ်မှတ်ဖေါ်ပြထားသည့် တသီးပုဂ္ဂလပြည်နယ်များပါဝင်စေလျက်” ဟု ပါရှိပါသည်။ ထိုအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ရှင်းလင်းခဲ့သည်မှာ- “ကျနော်တို့သည် ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ဘယ်နယ်ပယ်တွေ ပါမလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ရမည်။ အခု မသတ်မှတ်ရသေးဘူး၊ ပါချင်တဲ့နယ်တွေသာသတ်မှတ် ရမည်။ အခုမသတ်မှတ်ရသေးဘူး။ ပါချင်တဲ့နယ်မှ ပါကြပါဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ သို့သတ်မှတ်ဖေါ်ပြထားသည့် တသီးပုဂ္ဂလပြည်နယ်များသည်ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ဖေါ်ပြထားသည်နှင့်အမျှ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများရှိစေရမည်။
အဲသည်လိုလုပ်ပြီးမှ သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ် ချက်ကျသည်ဖြစ်စေ၊ အဲသည်လို ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါမှာ၊ သတ်မှတ် ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများကို သဘောတူကျေနပ်လို့၊ ဝင် လာတဲ့ပြည်နယ်များသာ ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဆိုပြီး အဲသည်လို သဘောလောက်သာထည့်ထားတယ်။ ဘယ်နယ်ကိုမှ ကျနော်တို့ အတင်း ထည့်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။”
ဤရှင်းလင်းချက်များအရဆိုပါက ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရာတွင် တသီးပုဂ္ဂလပြည်နယ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ထိုပြည်နယ်များတွင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာများရှိရမည်။ ထိုအာဏာများကိုပင်လျှင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မည်။ ပြည်နယ်များ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ကျပြီးပါမှ ထိုအချက်ပေါ်မှာ နှစ်သက်မှုရှိမှသာ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်သည်။ မိမိသဘောဆန္ဒအရ မပါဝင်ဘဲလည်း နေနိုင်သည်များကို ရှင်းလင်းထားပေသည်။ ဤအချက်များကို ကြည့် ခြင်းအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်များပါဝင်ရေးသည် အတင်းအကျပ် ပါဝင်စေခြင်းမရှိ၊ လွတ်လပ်ပြီးသဘောတူညီမှုရှိမှသာ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်သည် လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူမှု၊ ဒီမိုကရေစီကျမှု၊ လူမျိုးများ၏ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရှိမှု၊ လူမျိုးစုလူနည်းစု၏ အခွင့်အရေးများကို အလေးအနက်ထား အသိအမှတ်ပြုမှု စသည့် အခြေခံမူများပေါ်တွင် တည်ပေသည်။
ကယားပြည်နယ် - ပြည်ထောင်စုနှင့် လွတ်လပ်ရေး
(ကယားအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦး၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားချက်ကို မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်)
ကရင်နီလူမျိုးစုသည် ကရင်အမျိုးသာများ၏ အဆက်အနွယ်လူမျိုးစုဖြစ်သည်။ ကရင် (ကရင်နီလူမျိုးစုများ အပါအဝင်) အမျိုးသားတို့သည် မော်ဂိုလီယံလူမျိုးများ၏ အဆက်အနွယ်များဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။ တောင်ဘက်အရပ် ရှမ်းပြည်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြပြီး ရှမ်းပြည်ဒေသ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် အခြေစိုက် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုဒေသ၏တောင်ပိုင်း၌ ကရင် များကလည်းကောင်း၊ မြောက်ပိုင်းတွင် ကရင်နီများ ကလည်းကောင်း၊ ကနေ့ထက်တိုင် အခြေစိုက်နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ ကရင်နီဒေသတွင် ကရင်နီ (ခေါ်) ကယားနှင့် ကယန်း (ခေါ်) ဂဲခို၊ ဂဲဂါး၊ ဃခူ၊ ဃငန်၊ ကယောနှင့် မနူး လူမျိုးစုများ နေထိုင်သည်။
ကရင်နီလူမျိုးများသည် ၄င်းတို့ကို ကယား (သို့မဟုတ်) ပရားကြယား (PRA-KAYAS) ဟု ခေါ်ကြသည်။ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်တွင် ကရင်နီဒေသ၌ နယ်မြေ (၅)ခု ရှိ သည်။ နယ်မြေတခုစီကို စောဖျားဒူ ဟုခေါ်သည့် အကြီး အကဲများကအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုခေတ်မတိုင်မီက ကရင်နီနယ်မြေဒေသကို တဦးတည်းသောအကြီးအကဲများကအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းအား ဘူးဖေါ် (BU-HPAW) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး၊ လူထုက ကြည်ညို လေးစားခြင်းခံရသည်။ “ဘူးဖေါ်”၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “စပါးကျီ”ဖြစ်သည်။
ထိုနောက် ဖားဘန့် (HPA BANT) ဟုခေါ်တွင်သော အကြီးအကဲ ခေတ်၌ ကရင်နီနယ်ဒေသ၏ အရှေ့ပိုင်း နယ်မြေဒေသကို စောလဖွေ (SAW LA PHAW) အား အုပ်ချုပ်စေရန် ခွဲဝေပေးလိုက်သည်။ HPA BAUT သို့မ ဟုတ် HPAW BANT ဟု လည်း ခေါ်ဝေါ်ပြီး HPAW သို့မဟုတ် “ဖွ” သို့မဟုတ် “ဖွေ”၏ အဓိပ္ပါယ်မှာလည်း “စပါးကျီ” ဖြစ်ပါသည်။
အနောက်ပိုင်းနယ်မြေဒေကိုမူ ဘောလခဲ (BAWLKEH, ALSO CALLED BOOT-TA-KHT) ကြယ်ဘိုးကြီး (KE-PO-GEE)၊ နောက်ပုလဲ (NAUNG-PA-LE)၊ နာမ်ခုံ (NAM-ME-KON) ဟု ဒေသငယ်များဖြင့်ခွဲခြား လိုက်သည်။
စောလဖေါသည် မင်းတုန်မင်းနှင့် သီပေါဘုရင်များထံတွင် လေးစားစွာသစ္စာခံယူသည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်ချဲ့ တပ်များကို တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်။ သို့သော် အရေးနိမ့်သဖြင့် ၄င်း၏ လက်အောက် စောလဝီ (SAW LA WE) (ကယားဘာသာအားဖြင့် ဝီရဲ WEE-REH ဟုခေါ်သည်) အား ၄င်း၏အကြီးအကဲရာထူးကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ အထက်မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီး နောက်၌ မြန်မာနှင့် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ အာဏာပိုင်များတို့က ကရင်နီနယ်မြေ ဒေသကို သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာ များပေးကာ အုပ်ချုပ်စေရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခေတ်၌ နာမ်မဲခုံနှင့် နောက်ပုလဲဒေသများကို ဘောလခဲနှင့် ပူးပေါင်းပြီး၊ ဘောလခဲ အကြီးအကဲ၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်သို့ လွှဲပေးလိုက်သည်။ သို့နှင့် မြောက်ပိုင်းဘောလခဲဒေသသည် ကြယ်ဘိုးကြီး ဒေသမြောက်ဖက်တွင် ရှိလာသည်။ (ဤနေရာတွင် မှတ်ချက်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကရင်နီဒေသတွင် အဓိကအားဖြင့် ကန္တာရဝတီဒေသ (အရှေ့ပိုင်း ကရင်နီဒေသေ)နှင့် ဘောလခဲဒေသ (အနောက်ပိုင်း)တို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ဘောလခဲဒေသတွင် အလယ်၌ ကြယ်ဘိုးကြီးဒေသကို ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ကြောင့် မြောက်ဘောလခဲ၊ တောင်ဘောလခဲဟုဖြစ်လာသည်။ တောင်နှင့် မြောက် ဘောလခဲဒေသကို အကြီးအကဲတဦးကသာ အုပ်ချုပ်သည်။ သို့ဖြင့် ကရင်နီနယ်မြေဒေသတွင် ကန္တာရဝတီ၊ ဘောလခဲနှင့် ကြယ်ဘိုးကြီးနယ်မြေ ဒေသများ ပါဝင်သည်။ နယ်မြေဒေသတခုစီကို စောဖြာဒူး (SAO-HPYA-DU) ဟုခေါ်သည့် အကြီးအကဲတဦးစီက ဗြိတိသျှလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး အရာရှိတဦး၏ အကြံဉာဏ်ကို ရယူပြီး အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲရသည်။
(ဤနေရာတွင် ဖါးကန့်အကြောင်းအရာ၊ နာမ်မဲခုံနှင့်နောက်ပုလဲ နယ်မြေဒေသများအား ဘောလခဲနှင့် ပူးပေါင်းသည့် အကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့ မှတ်ချက်ရေးသားထားသည်။ ဖါးကန့်နာမည်သည် ဖေါဘန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ “ဖေါ” အဓိပ္ပါယ်က “ကျီ-စပါးကျီ”ဖြစ်သည်။ လမ်း ပမ်းဆက်သွယ်မှု တောတောင်ထူထပ်မှု ကြမ်းတမ်းမှုများကြောင့် အုပ်ချုပ်သူ ဖါးဘန့်ကခွဲဝေသွားပုံဖြစ်ဟန်တူသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဖယ်ဒရယ်သဘော ပုံအသွင်တူသည်။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က နာမ်မဲ့ခုန်နှင့် နောက်ပုလဲတို့တွင် ရိုးရာ ဓလေ့အရ အုပ်ချုပ်ရေးအမွေဆက်ခံမည်လူ မရှိသဖြင့် အများနယ်သူနယ်သားဆန္ဒ မေးမြန်းပြီး၊ ဘောလခဲစော်ဘွား လက်အောက်ခံ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ စတင်ပေါက်ဖွားလာသည်ဟု ခေါ်နိုင်လောက်သည်။)
ကရင်နီဒေသတွင် သယံဇာတပေါကြွယ်ဝသည်။ ရာသီဥတုနှင့်ဘူမိ ဗေဒအခြေအနေများအရ အရည်အသွေးကောင်းသည့် ဓာတ်သတ္တုများနှင့် အနက်စင်းရှိသည့် ကျွန်းသစ်များ လာရောက်ထုတ်ယူ ဝယ်ယူကြသဖြင့် ဘောလခဲနှင့် ကန္တာရဝတီ နယ်မြေဒေသများမှ အကြီးအကဲများသည် အခွန် အကောက်များ ရရှိကြသည်။
ကရင်နီနယ်မြေဒေသကို လန်ဒန်ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတိုက် ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်ဆိုပါသော်လည်း ပြည်နယ်ငွေစာရင်းများကို ရှမ်းပြည်၊ တောင်ကြီးရှိ ဗြိတိသျှအရေးပိုင် (RESIDENT) က ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကရင်နီနယ်သည် ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှုခေတ်တွင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံ (PROTECTORATE STATE) နယ်မြေဒေသဖြစ်သည်။
ဂျပန်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်သို့ ပြောင်းလဲရောက်ရှိလာသည့်အခါ ကရင်နီနယ်မြေဒေသ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးကိစ္စများကို ရန်ကုန်ရှိ ဂျပန် အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့က တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်စီမံသည်။ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြလိုသည်မှာ (၁၉၄၅)ခုနှစ် ဂျပန်စစ်တပ်များ ဆုတ်ခွာကြသည့်အခါ ကယန်း၊ ပဒေါင်းများနှင့် ကယန်း၊ ဃငန်းတို့က မောင်းပိုင် သို့မဟုတ် မုန်းပိုင် သို့မဟုတ် မိုးဗြဲနယ်မြေဒေသနှင့် ဘောလခဲ မြောက်ပိုင်းဒေသတို့ရှိ ဗြိတိသျှ ပြောက်ကြားတပ်အဖွဲ့အမှတ် (၁၃၆)နှင့်ပူးတွဲ၍ ဂျပန်တပ်များကို တော်လှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် ဂျပန်များ မြောက်များစွာသေကြေ၊ ဒဏ်ရာရ ထိခိုက်ခြင်းခံကြရသည်။ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်မှာ ပဒေါင်အမျိုးသား သိုင်းဘဟန်ဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်၏ဇာတိဌာနမှာ မုန်းပိုင်း(မိုးဗြဲ) (ထိုအခါက ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ပါဝင်နေခဲ့သည်) ဖြစ်သည်။ (မှတ်ချက်။ ။ မုန်းပိုင် (MONG PAI) ကို ရှမ်းဘာသာဖြင့် မုန်းဖိုင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး မိုးဗြဲဟုအများသိကြသည်။ မိုးဗြဲကို ရှမ်းစော်ဘွားက အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ လူဦးရေ (၉ဝ) ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပဒေါင်သိုင်းဘဟန်၏ မျိုးချစ်စိတ်နှင့် တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကို ကြားသိရသောအခါ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ထဲသို့ ကရင်နီနယ်မြေဒေသ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် စည်းရုံးရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မူလ ကရင်နီခေါင်းဆောင် အချို့က ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းရန် ဆန္ဒမရှိ။ တုံ့ဆိုင်းနှေးကွေး နေကြသည်။ စိတ်ပါလက်ပါ မရှိကြပေ။ (မူလ ကရင်နီခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဦးစောသိန်း၊ ဦးဘီ၊ ဦးကိလဘာရာဆူတို့သည် ကရင်နီဒေသ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကရင်နီခေါင်းဆောင်များမှာ ဦးအေမြလေး၊ ဦးစိန်၊ စော်ဘွားစောရွှေ၊ မြို့အုပ် ဦးလွီးဖီ တို့ဖြစ်ကြပြီး၊ ပြည်ထောင်စုနှင့် ပူးပေါင်းကြသည်။) ပင်လုံညီလာခံသို့လည်း တက်ရောက်ခြင်း မရှိသည့်ပြင် ပင်လုံစာချုပ်တွင်လည်း လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့ သော် အခြားတဖက်တွင် သိုင်းဘဟန်သည် အခြားကရင်နီခေါင်းဆောင်များအား မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းရန် စည်းရုံးကြိုးပမ်းမှုကို (၁၉၄၈)ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေးမရရှိသေးမီ အချိန်ကလေးမှာပင် အောင်မြင်မှုရရှိလိုက်သည်။ ကယန်း၊ ပဒေါင် မျိုးချစ်ကြီးဖြစ်သူ သိုင်းဘဟန်(နာမည်ရင်း ဦးဂျူးလီးယပ်(စ်) သိုင်းဘဟန်)အား ဗြိတိသျှတို့က အမ်ဘီအီး ဘွဲ့ကိုပေးသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပေ။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၄င်းအား ရဲဘော်တဦးတယောက်အဖြစ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသော စာကိုမူ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ လက်ခံသိမ်းဆည်းထားသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးသောအခါ သိုင်းဘဟန်၏ မိုးဗြဲ (မုန်းပိုင်း-မုန်းဖိုင်း)ဒေသကို ကရင်နီနယ်မြေဒေသတွင်းသို့ ဖွဲ့စည်းအုပ် ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရပူးပေါင်းလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး နောက်တွင် ကရင်နီနယ်မြေဒေသ၌ ဖဆပလအစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းနှင့်ကေအင်ဒီအို အဖွဲ့ပိုင်းတို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ နောင်တွင် ဤပဋိပက္ခသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန့်နှံ့သွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကောင်းမွန်လာပြီး တည်ငြိမ်လာသည့်အခါ ကရင်နီရေးရာဝန်ကြီးဌာနကို ကရင်နီပြည်နယ်ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပြီး၊ ကရင်နီ ဟူသောဝေါဟာရမှ “ကယား”အမည်သို့ ပြောင်းလဲခေါ်တွင်သည်။ ဤ နေရာတွင် ဖေါ်ပြလိုသည်မှာ သိုင်းဘဟန်သည် အချိန်မရောက်မီကွယ်လွန် သွားပြီးနောက် ၄င်း၏ ဇာတိနယ်မြေဒေသဖြစ်သည့် မုန်းပိုင်(မိုးဗြဲ) ဒေသကို ကယားပြည်နယ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ ထည့်သွင်းပေးလိုက်သည်။ သိုင်းဘဟန် သည် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ မိမိ၏နယ်မြေဒေသ အကျိုးအတွက် အထူးတလည် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးကိစ္စများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ လူပ်ရှားမှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများသည် နှေးကွေးခြင်းမှ မြန်ဆန်သော အပြောင်းအလဲများ၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစရာမှ ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများ၊ သံသယများမှ ယုံကြည်မှုများ၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ ချစ်ကြည်လေးစားမှု များကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းပြင် တဦးနှင့်တဦး ယုံကြည်စွာ နားလည်မှုတည်ဆောက်ကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် (တိုင်းပြည်)စည်ပင်သာယာဝပြောမည်။
ကရင်နီများ တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော အဖြစ်အပျက်များမှ သို့ မဟုတ် သမိုင်းသင်ခန်းစာရယူမိသည်မှာ လက်နက်ကိုင်စွဲခြင်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်၍ မရရှိနိုင်။ တဦးနှင့်တဦး ခွင့်လွှတ်ပြီး အတူတကွ နားလည် ချစ်ကြည်မှု တည်ဆောက်ကြမှသာ စည်လုံးညီညွတ်မှုကို ရရှိကာ ကောင်းမွန်သော လူ့ဘဝကိုရရှိပြီး အနာဂတ်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်သာဖြစ်သည်။ ။
Posted by Dr. Tint Swe at 7:45 PM0comments
Posted by Dr. Tint Swe at 7:44 PM0comments